I-Andong Hahoe Folk Village | Izindlu zeKorea zemveli | I-UNESCO
I-Andong Hahoe Folk Village
I-40, Jongga-gil, Pungcheon-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do
N 안동시 풍천면 하회 회 길 40
Ixesha lehlobo: 09: 00-18: 00
Ixesha lobusika: 09: 00-17: 00
IHahoe Village ilikhaya kwinzala yeRyu clan yasePungsan kwaye yaziwa kakhulu ngezindlu zayo zemveli. Indawo awazalelwa kuyo abafundi abadumileyo beXesha likaJoseon njengeGyeomam Ryu Un-ryong kunye neSeoae Ryu Seong-ryong, le lali yaziwa nangakumbi emva kokuba uKumkanikazi uElizabeth waseNgilane etyelele ngo-Epreli 21, 1999.
Ilali yaseHahoe (eguqulela “kwilali egqunywe nguManzi”) ifumana igama kuMlambo iNakdong, ojikeleza umda wedolophu. Le lali ikwindawo enamazantsi eNtaba yeHwasan, amathafa eNtaba yeTaebaek enyuka aye empuma. Embindini wedolophana kugcwele izindlu ezinkulu ezinophahla lwendlu yeRyu clan, zongeza umtsalane wazo kunye nophahla olujikelezileyo.
Ilali yaseHahoe inezinto ezintle ezigqwesileyo: umlambo waseNakdong ogqumayo ojikeleza ilali, iThengongdae Cliff entle, iilwandle ezinesanti ezingagugiyo, kunye nemithi emide eqabileyo. Abandwendweli banokuthatha isikhephe baye e-Buyongdae Cliff ukuze bajongwe kwilali.
Ukongeza kwindawo entle ephefumlayo, ilali yaseHahoe ibonelela ngokutya okuthe kratya kwalapha ekhaya. Zama i-Andong Soju (isiselo esinxilisayo), iHeotjesabap (uhlobo lweBibimbap edliwe zizikhulu), u-Andong Gangodeungeo (i-mackerel enetyiwa), kunye no-Andong Guksu (uhlobo lwesitya esine-noodle).
Iindawo ezinomtsalane ziquka iBongjeongsa Temple (eyakhiwa ngeXesha leSilla), iGosan Seowon (iAkhonfuti yaseConfucius), iGwiraejeong, iGyemyeongsan Mountain Recreational Forest, Ihlathi laseHakgasan Mountain, neNtaba yaseWaryongsan.
I-Hahoe Village, kunye ne-Yangdong Village eseGyeongju, yongezwa kuLuhlu lweLifa leMveli le-UNESCO phantsi kodidi "lweeVali zeMbali zaseKorea" ngoJulayi 31, 2010.
Umnyhadala woMdaniso weMask kaMask ubanjwa rhoqo ekwindla.
Ukuqeshiswa kwabantwana Stroller